हरीशले गर्लफ्रेण्ड अंशुलको बिहे भएपछि घरमै छिरेर गोली हाने ! | जनदिशा
हरीशले गर्लफ्रेण्ड अंशुलको बिहे भएपछि घरमै छिरेर गोली हाने !
नयाँ दिल्ली । हाम्रो छिमेकी देश भारतको ‘भारत नगर इलाका’ मा क युवतीको घरमा छिरेर गोली हानिएको छ । अंशुल नामको ती युवती चार्टर्ड अकाउन्ट होल्डर हुन् । अहिले ती घाइते अंशुललाई अस्पतालमा भर्ती गरिएको छ, जहाँ उनको उपचार भइरहेको छ । जानकारी गराइए अनुुसार ती आरोपीले अंशुललाई पहिल्यै देखि चिन्थे । प्रहरीलाई आरोपी युवकलाई गिरफ्तार गरिसकेको छ ।
ती घाइते युवतीको नाम अंलुल शालीमार हो । उनी २५ वर्षकी भइन् । सुत्रका अनुसार उनीहरु एक अर्काको प्रेममा थिए । ती युवतीका अनुसार उनको विहे भएपछि उनीहरुको ब्रेकअप भएको थियो । ती आरोपी युवकको नाम हरीश उर्फ पिंटु हो ।
अंशुल र हरीशको रिलेशनसिप पाँच वर्षसम्म चलेको थियो । केही दिन पहिले अंशुलको बिहे भएको थियो । त्यसपछि हरीशले अंशुललाई दिन प्रति दिन धम्की दिँदै आएका थिए । शनिबार राति अंशुलको घरमा हरीश छिरे र हमला गर्न थाले । जानकारीमा आए अनुसार अहिले अंशुल खतराबाट बाहिर छन् ।
ठाणेमा २० वर्षीय युवतीको हत्या
महाँराष्ट्रको ठाणेमा शनिबार २० वर्षीय एक युवतीको हत्या भएको छ । आरोपी आकाश पवारलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । ती आरोपी आकाशले ती युवतीलाई पछिल्लो केही महिना देखि फलो गरिरहेका थिए । यो कुराको जानकारी ती युवतीको परिवारले प्रहरीमाझ उजुरी पनि दिएका थिए, तर प्रहरीले कार्वाही गरिरहेका थिइनन् । ती युवती आफ्नो स्कुटरमा जाँदै गर्दाको समयमा समेत आकाशले हमला गर्ने गर्थे ।
यो गत शनिबार १०ः३० बजेको घटना हो । रोडमा ती युवती घाइते अवस्थामा भेटिएको थियो । उनलाई नजिकैको प्राइभेट अस्पतालमा लगियो, तर बाँच्न भने सकिनन् । प्रहरीका अनुसार ती युवती कोपरीका बासिन्दा हुन् । नले ठाणेमा पढ्दै आएकी थिइन् । ती युवतीको घाँटी र पेटमा हमला गरिएको छ । एजेन्सीको सहयोगमा सरद
Previous Previous post: भेनेजुएला ड्रोन हमला: जोगिए राष्ट्रपति, सात सैनिक घाइते
Next Next post: ४ घण्टापछि बल्ल खुल्यो नारायणगढ-मुग्लिन अवरुद्ध सडक